Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke IV) | Site na Linux
Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke IV)
N'ikpeazụ, naanị ihe a ga-ahụ bụ otu esi edebanye aha mgbanwe na mmepe anyị.
1 9. changesdebanye aha mgbanwe
2 10. Na-enyocha akụkọ ntolite anyị
9. changesdebanye aha mgbanwe
Anyị ga-eme mgbanwe ụfọdụ na koodu ntinye koodu. Mbụ anyị ga-agbakwunye ụdị usoro gburugburu * nix n'ihi na n'ihendesịta na mgbe ahụ anyị ga-eme ka a ubé ọzọ ịnụ ọkụ n'obi na ozi. N'okwu a anyị na-eme ya na nchịkọta ederede.
Ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ iwu ọnọdụ git Nke a ga-agwa anyị na enwere mgbanwe na anyị ga-emekwa ọhụụ eme ịdebanye aha ha. Ya mere, anyị na-emezu:
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "dinggbakwunye ozi na-anụ ọkụ n'obi"
Na nhọrọ -m anyị na-agafe ederede nke eme ma ya mere na ọ gaghị emepee ederede editọ, ọ bụ ụzọ dị ngwa iji mee a eme mgbe mgbanwe ndị ahụ anaghị adị ọtụtụ ma ọ nweghị ezi uche imeghe onye editọ ka ọ kọwaa otu akara.
Mgbe anyị malitere ọrụ anyị na Koodu Google, anyị guzobere na ọ ga-enwe ikikere GPL v3, ọ na-ekwu na a ga-ekesa ngwanrọ ahụ na otu faịlụ faịlụ ikike ahụ. Ọ bụ ya mere anyị nwere ike jikọọ na saịtị nke GNU ma budata ya.
Ugbu a anyị nwere faịlụ ikike anyị nwere ike itinye ya na ọrụ anyị. Nanị site na idobe ya na ndekọ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ a ọnọdụ git, ọ ga-agwa anyị na enwere mgbanwe mana na faịlụ a na-ekwu abụghị «esoro»(Ọ bụrụ n’ịnye m oge ahụ).
Ka mgbanwe ahụ wee pụta ìhè na nchekwa anyị, anyị ga-agbakwunye ya nke ọma site na iji iwu tinye tinye.
~ / HelloWorld $ git tinye LICENSE.txt
Ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ ọzọ ọnọdụ git nke a ga-agwa anyị na agbakwunyela faịlụ ọhụrụ. N'ikpeazụ anyị na-agba ọsọ a eme guzosie ike a ọhụrụ version na n'ikpeazụ anyị nwere ike bulite ugbu a steeti anyị obodo repository ka ime repository kwadoro na Koodu Google.
~ / HelloWorld $ git commit -a -m "Na-agbakwunye faịlụ GPL v3" ~ / HelloWorld $ git push gc master
10. Na-enyocha akụkọ ntolite anyị
Ọ bụrụ na anyị jikọọ na nchekwa nke ọrụ anyị Koodu Google anyị nwere ike ịhụ na ngalaba Source na ngalaba mgbanwe ụdị dị iche iche anyị jiri na mmepe anyị.
Pụrụ ịhụ repository na adreesị: http://code.google.com/p/lecovi-hello-world/source/browse/
Dị ka ị ga-ahụ, ọ dị ezigbo mfe ma ọ bụ ngwaọrụ bara uru. Enwere m olileanya na ị masịrị ya, ọ rụworo gị ọrụ ma ana m echere azịza gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Malite oru ngo na Git na Google Code (Nkebi nke IV)
Daalụ maka usoro isiokwu a na-atọ ụtọ isiokwu !!
Enwere ihe pụrụ iche kpatara iji Google Code karịa Github nke yiri ka ọ ga-ama ama? M na-arịọ ya si kasị ukwuu nke ndị na-akọghị banyere XD
Ọ bụghị naanị na ọ dị ka ọ dị mfe ma na-eche na ọtụtụ mmadụ enweela akaụntụ Google, ị nwere ike nweta ọrụ ahụ naanị site na ịga na saịtị Google Code.
GitHub bụ ezigbo ngwá ọrụ, mana ịnwe nhọrọ nhazi ọzọ mgbe ụfọdụ na-eme ka ọ bụrụ ihe karịrị ike maka newbie ahụ.
Ana m akwadebe ụfọdụ obere ebe m na GitHub na Bitbucket na-arụ ọrụ ntakịrị, na-ewebata Mercurial na hg-git.